Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo dhagax dhigay Dhismaha Cusub oo loo dhisayo Ururka Dowladaha Hoose Garoowe
Garoowe:-Madaxweyne ku xigeenka ahna ku simaha Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Cabdixakiim Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey ayaa maanta Magaalada Garoowe ee Caasimada dowladda Puntland ka dhagax dhigay dhismaha Cusub ee ee Ururka Dowladaha Hoose ee Puntland.
Dhismaha xaruntaan ayaa waxaa fulinaysa Hay’adda UN-HAPITAT oo kamid ah hay’addaha ka howlgala Puntland,waxana ku guulaystay dhismaha xaruntaan Shirkada Saacid Conistraction Company .
Madaxweyne ku xigeenka ahna ku simaha Madaxweynaha Dowladda Puntland Cabdixakiim Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey ayaa si aad ah ugu mahadceliyey Hay’adda UN-HAPITAT oo mashruucani ka fulinaysa Puntland gaar ahaan Magaalada Garoowe .
‘’Waxaan rajeyn in dhismahaan uu noqdo mid anfaca wiilkeena wiilkiisa UN-HAPITAT waxaan uga mahadcelin shaqada faraha badan ee ay u hayaan shacabka Puntland waxana kula dardaarmayaa in ay laba jibaaraan dadaalkooda’’Ayuu yiri Cabdixakiim Camey.
Madaxweyne ku xigeenka ahna ku simaha Madaxweynaha Dowladda Puntland Cabdixakiim Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey ayaa sidookale sheegay in wax lagu farxo ay tahay in ay soo badanayaan dhismayaasha quruxda badan ee laga hirgelinayo gudaha Puntland .
Xafiiska Warfaafinta,Wacyigelinta,Hiddaha Iyo Dhaqanka ee Madaxtooyada Puntland.